တစ်ယောက်က CUCKOO'S NEST PREVIEW အပိုင်း ၁ ကိုပျံသန်းခဲ့သည် - သတင်း
တစ်ခုမှာအဆိုပါ Cuckoo ရဲ့အသိုက် Preview အပိုင်း 1 ကျော်ပျံသန်းခဲ့သည်
ကျနော်တို့ကဒီမှာယဉ်ကျေးမှုအယ်ဒီတာများ The Tab ပြဇာတ်ရုံအနည်းငယ်ကိုကြိုက်တယ်၊ အထူးသဖြင့်ငါတို့တွေ UEA ကျောင်းသားတွေရဲ့ဖျော်ဖြေမှုပြဇာတ်ရုံကိုနှစ်သက်တယ်။ ဒါကြောင့် Ken Kesey ရဲ့ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထုကိုအခြေခံထားတဲ့ Drama Studio ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ထုတ်လုပ်မှုအကြောင်းကိုသူတို့လေးယောက်နဲ့အတူထိုင်ဖို့အချိန်ယူခဲ့တယ်။ တစ်ခုမှာ Cuckoo ရဲ့အသိုက်ကိုကျော်ပျံသန်းခဲ့ပါတယ် ဒါဝိဒ်သည် Wasserman အားဖြင့်ဇာတ်စင်များအတွက်အဆင်ပြေအောင်အဖြစ်။
ဂျက် Carmichael တတိယနှစ်အင်္ဂလိပ်စာပေနှင့်ဒရာမာကျောင်းသားဖြစ်သည်။ သူသည်တတိယနှစ်တွင်ဇာတ်ညွှန်းရေးခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကျောင်းသားဖြစ်သောရော့အဲလစ်နှင့်အတူပြဇာတ်ကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ဒါကသူတို့ဒါရိုက်တာရဲ့ကုလားထိုင်၌ထိုင်ပါလိမ့်မည်ရှိရာသူတို့နှစ် ဦး စလုံးများအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအဓိကထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Isobel Solutions တတိယနှစ်အင်္ဂလိပ်စာပေနှင့်ပြဇာတ်ကျောင်းသားတစ် ဦး သည်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောသူနာပြု Ratched ကိုကစားသည်။
Jonathan Moss R. P. McMurphy ၏အစိတ်အပိုင်းကိုကစားသည့်ဒုတိယနှစ်ဒရာမာကျောင်းသားဖြစ်သည်။
အဲလက်စ် - ပထမ ဦး စွာစာအုပ်ကိုမတွေ့တဲ့သူတွေ၊ ရုပ်ရှင်မဖတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအတိုချုပ်ရှင်းပြပေးနိုင်မလား။
ရော့ - ပျားရည်ဆမ်း၊ သံနှလုံး၊ သူနာပြု Ratched!
ဂျက်: ကောင်းပြီ! ထိုအ McMurphy အတွက်လာနှင့်အမှုအရာထလှုပ်ဖို့ဆက်လက်။ သူသည်ယခင်ကကျူးလွန်ခဲ့သောပြစ်မှုများကြောင့်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးသူသည်ထောင်ထဲတွင်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုကိုတောင်းပန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူကအရာအားလုံးကိုလှုပ်ခါလိုက်ပြီးလူနာများကိုသူနှင့်အတူခေါ်လာပြီးသူနာပြု Ratched ကိုသူပုန်ထရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ဗစ်တိုးရီးယား။ ။ ဒါဆိုမင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာ Cuckoo ရဲ့အသိုက် အရာအားလုံးထက်အထက်မှာလား
ရော့ - ငါရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ကိုနှစ်သက်တယ်။ ပြီးတော့စာအုပ်ကိုဖတ်တယ်၊ အဲဒါကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်။
ဂျက်: ငါယခင်ကပြဇာတ်အများကြီးအသိပညာရှိခဲ့ဘူး။ ငါပြဇာတ်၏စကားကိုငါကြားရချင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ရော့ငါ့ကိုသူကအကြံပြုသောသူသည်ငါတို့ကြိုးစားရန်အကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်, ကြိုးစားရန်ရည်မှန်းချက်ကြီးတ ဦး တည်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်မတိုင်မီကျွန်တော်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့ငသူဖြစ်ခဲ့သည်။
အဲလက်စ် - ရုပ်ရှင်နဲ့အတူရှိပြီးသားနှစ်ခုစလုံးကိုကစားပါ။ သင်ရုပ်ရှင်ကိုမင်းကိုလွှမ်းမိုးစေသလား၊ အထူးသဖြင့်ဒီရုပ်ရှင်ဟာစာအုပ်ထက်ပိုပြီးလူသိများတဲ့အတွက်လား
ဂျက်: ကျွန်ုပ်သည်စာအုပ်ကိုမဖတ်ဖူးပါ။ ရောဘတ်နှစ်ခုလုံးပြုတော်မူပြီ သူကရုပ်ရှင်နှင့်အတူကြီးပြင်းလာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်စာအုပ်ဖတ်နေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်ငါကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ညွှန်းကိုဖတ်ရှုခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကနေရယူချင်သောကြောင့်, ငါစာအုပ်သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ထဲကနေဘာမှမရလိုလျှင်, ရော့အချို့လှုံ့ဆော်ပေးရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့အလုပ်လုပ်ကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ဗစ်တိုးရီးယား။ ။ မင်းကိုမျက်စိအသစ်တစ်ခုပေးတယ်။
ရော့ - ဟုတ်တာပေါ့၊ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအတွင်းအပြင်အပြင်ဘက်ကိုပေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါစာအုပ်ကနေအများအားဖြင့်ချေးပါတယ်ထင်, ငါတို့တကယ်မှာအားလုံးရုပ်ရှင်ထဲကနေချေးဘူး။
McMurphy သည် electroshock ကုသမှုခံယူရသောအိပ်ရာဖြစ်သည်။
ဗစ်တိုးရီးယား။ ။ ။ ပြဇာတ်ရဲ့ ဦး တည်ချက်အတိုင်းသဘာဝရှုထောင့်ကိုရှာခဲ့တာလား။
အလုပ်ရှင်သည်မည်သည့် gpa ကိုရှာဖွေသည်
ရော့: မျှမျှတတသဘာဝ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘာဝတရားကိုတမင်တကာရွေးချယ်ပြီးသည့်အချိန်အချို့ရှိသည်။
ဂျက်: Martini ရဲ့ဇာတ်ကောင်သူတစ် ဦး warzone ၌တည်ရှိ၏ hallucinates သည့်အခါပြဇာတ်အတွက်အထူးသဖြင့်အခိုက်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်အလင်းအိမ်နှင့်အသံ effect ကိုသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်-ဒါပေမယ့်ရှားပါးယခုအချိန်တွင်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်သဘာဝပါပဲ။
အဲလက်စ် - မင်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကဘာလဲ။
ဂျက်: ကောင်းပြီ, အစုအတွက်တ ဦး တည်းဖြစ်ရဲ့။ ဒါဟာ UEA စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဘေးထွက်န်းကျင်ကုလားကာအသုံးမပြုခဲ့ကြောင်းပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အချို့ပစ္စည်းပစ္စယလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအပေါ်အကြီးတန်းနည်းပညာရှင်နှင့်အတူအတော်လေးကောင်းစွာညှိနှိုင်းခဲ့ကြရတယ်။ အဆိုပါသူနာပြုရဲ့ဘူတာရုံအဖြစ်ကောင်းစွာတည်ဆောက်ရန်ကြီးမားသောအရာနှင့်ထောင့်ရှိလျှပ်စစ်ဗီရိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် yeah set ကိုအဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အစမ်းလေ့ကျင့်သည်။
ရော့: အဆိုပါသွန်းတောက်ပဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထား။ သူတို့ကပဲအချိန်တိုင်းလာနှင့်တိုင်ကြားကြဘူး။
အဲလက်စ်: Isobel - သူနာပြုအလှည့်အပြောင်းကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ခက်ခဲသလဲ။
Isobel: အရမ်း။ ငါသိလိုက်တော့သူမကိုရလိုက်တော့ငါအရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ ပြီးတော့လူတွေကသူမကိုရှုထောင့်တစ်စုံတစ်ခုနဲ့ဆိုးသွမ်းမှုတွေအဖြစ်မြင်တာကိုကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်မှာကြည့်ရတာပျော်စရာကောင်းပေမယ့်ပြဇာတ်ရုံမှာခင်ဗျားဟာပိုပြီးဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ အဲဒါကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်လို့ပါ။ ဒါနဲ့သူမပြားချပ်ချပ်အထုပ်ဇာတ်ကောင်မယ့်မျိုး, သေချာပေါက်အစဉ်အမြဲမြင်ကြပေမယ့်ကျိန်းသေမဟုတ်ခဲ့ကွောငျးသူမ၏ရန်ပိုမိုလူ့ခြမ်းကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
ဗစ်တိုးရီးယား။ ။ အိမ်သို့ သွား၍ အော်ငိုသည် Downton Abbey ။
အဲလက်စ် - သူမကိုပိုဆိုးစေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Isobel: ငါမျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းကသူ့ကိုလူကြမ်းအဖြစ်သာမကလူအတော်များများနဲ့သူမလုပ်နေတာကမကောင်းဘူးဆိုတာကိုသူမမသိနိုင်ဘူး။
အဲလက်စ် - ဟုတ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်နဲ့စာအုပ်နှစ်ခုလုံးမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူနာတွေကအမြဲတမ်းပုံမှန်ပုံရတယ်။
ငါတို့အပိုင်း2တစ်ခုမှာ Cuckoo ရဲ့အသိုက်ကိုကျော်ပျံသန်းခဲ့ပါတယ် အင်တာဗျူးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကထုတ်ဝေပါလိမ့်မည်။
တစ်ခုမှာ Cuckoo ရဲ့အသိုက်ကိုကျော်ပျံသန်းခဲ့ပါတယ် ကြာသပတေးနေ့ ၁၁ ကိုပြနေသည်th- စနေနေ့ ၁၃thညနေတိုင်း UEA Drama Studio ၌။ UEA ကျောင်းသားများအတွက် ၀ င်ခွင့်အတွက်ပေါင် ၄.၀၀ ဖြစ်သည်။ လက်မှတ်များကိုအွန်လိုင်းမှ ၀ ယ်ယူနိုင်ပါသည် ဒီမှာ ။